इन्स्टाग्राम अब एन्ड्रोइडको लागि #Instagram #Android
Aakar April 05, 2012
तपाई एन्डोइड फोन प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने, तपाईको लागि खुशीको खबर छ ! आईफोनको लागि मात्र उपलब्ध र करोडौँले रुचाएको, ‘पपुलर फोटो सेयरिङ एप’, ‘इन्स्टाग्राम’ अब एन्ड्रोइड फोनको लागि पनि आएको छ। तपाई आईफोनको प्रयोगकर्ता र ट्विटर एडिक्ट हो भने सायद तपाईले ‘इन्स्टाग्राम’ चलाएको हुनुपर्छ तर अहिलेसम्म चलाएको छैन भने पनि केही छैन, अब चलाउँदा हुन्छ !
आइफोन र एन्ड्रोइड दुवैको लागि इन्स्टाग्राम उपलब्ध छ ! तपाई मोबाइलबाट फोटो खिच्न रुचाउनुहुन्छ र अनलाइनमा आफ्नो फोटो सेयर गर्ने गर्नुहुन्छ भने, इन्स्टाग्राम तपाईको लागि उपयुक्त फोटो सेयरिङ एप हुनसक्छ !
के हो इन्स्टाग्राम?
साधारण भाषामा भन्दा ‘इन्स्टाग्राम’ एउटा फोटो सेयरिङ एप्लिकेशन हो, जुन आईफोन र एन्ड्रोइडको लागि उपलब्ध छ ! आफूले मोबाइलबाट खिचेका फोटोहरुलाई, एपको माध्यमबाट अझ कलात्मक बनाइ, यसबाट अनलाइनमा सजिलो सँग आफ्नो फोटोहरु सेयर गर्न सकिन्छ । इन्स्टाग्राम पनि एकप्रकारको मोबाइल सोसल नेटवर्किङ साइट नै हो, जहाँ आफ्ना फोटोहरु अपलोड गर्न सकिन्छ, अनि ट्विटर कै जसरी साथीहरुलाई फलो गर्न सकिन्छ, अनि साथीहरुले तपाईलाई पनि फलो गर्न सक्छन् ! अनि तपाईले अपलोड गरेका फोटोहरुमा कमेन्ट र लाइक गर्न सक्छन् ।
अस्ति सार्वजनिक गरिएको इन्स्टाग्राम एन्ड्रोइड एपमा पनि आइफोन इन्स्टाग्राम एपमा भए जस्तै सेवा र सुविधा रहेकाछन् ! इन्स्टाग्राममा फोटोमा इफेक्ट दिने, फोटो अपलोड गर्ने त भइहाल्यो, यसबाहेक इन्स्टाग्रामबाटै फेसबुक, ट्विटर, फोरस्क्वायर, टम्बलर आदि साइटहरुमा पनि आफ्नो फोटो सिधै सेयर गर्न सकिन्छ ।
आफू एन्ड्रोइड फोन चलाउने कारण, आफूले हिजो देखि इन्स्टाग्राम चलाउन थालियो ! यदि तपाई इन्स्टाग्राममा हुनुहुन्छ भने मलाई (aakapost) खोजेर फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
एन्ड्रोइड २.२ वा यो भन्दा माथिको एन्ड्रोइडमा चल्ने इन्स्टाग्राम गुगल प्लेमा उपलब्ध छ ! आइफोन प्रयोगकर्ताले भने आइट्युन्सबाट यो एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ।
यो माथिको फोटो मेरो इन्स्टाग्रामबाट लिइएको हो ! :)
Utsav August 1, 2012 at 11:39 AM
try lightbox and pixelo matic on android as well :)
Mr Nakkaleypunk August 1, 2012 at 11:39 AM
Do you want to earn money online?? No registration fee, BI-weekly payment, Real Money and absolutely free..and please this is notafake.. Click the below link http://www.onlinejobsfree.com/?id=976092
Sanjogsurendra August 1, 2012 at 11:39 AM
"आफू एन्ड्रोइड फोन चलाउने कारण, आफूले हिजो देखि इन्स्टाग्राम चलाउन थालियो ! "
That means, you are using android phone because of instagram?
Ekendra August 1, 2012 at 11:39 AM
दुखको कुरा इन्स्टाग्रामले एन्ड्रोइड ट्याब्लेट अझै सपोर्ट गरेको छैन :(